Inqubomgomo Yobumfihlo | IMIHLA NGE-DENMARK
I-ejensi yobuchwepheshe kusukela ku-1992 - Ucingo: 030-30824619
Ikheli lewebsite yethu yi: https://www.expressheirat.com.
Yiluphi ulwazi lomuntu siqu esiqoqayo nokuthi kungani siliqoqa
Lapho izivakashi besho kuwebhusayithi, thina futhi iqoqe idatha ukuthi livela ifomu comment, yesivakashi ikheli le-IP kanye ejenti yomsebenzisi string (ukuze isiphequluli uchazwa) ukusekela ukuhlonza ogaxekile ,
Kusukela ikheli lakho le-imeyili, umucu engaziwa kungadalwa (owaziwa nangokuthi hashi) futhi isevisi Gravatar ziyadlula ukuhlola uma usebenzisa le. Inqubomgomo yobumfihlo yenkonzo ye-Gravatar ingatholakala lapha: https://automattic.com/privacy/. Uma ngabe ukuphawula kwakho kwabiwe, isithombe sakho sephrofayela sizobonakala esidlangalaleni kumongo wamazwana wakho.
Uma ungumsebenzisi obhalisiwe futhi ulayisha izithombe kulewebhusayithi, kufanele ugweme ukulayisha izithombe nge-EXIF GPS indawo. Izivakashi kuleli webhusayithi zingalanda izithombe ezigcinwe kule webhusayithi futhi zikhishwe ulwazi lwendawo yazo.
Uma uthumela amazwana kuwebhusayithi yethu, kungase kube imvume yokulondoloza igama lakho, ikheli le-imeyli kanye newebhusayithi kumakhukhi. Lesi yisici esikahle ngakho akudingeki ukuthi ufake kabusha le datha uma ubhala elinye amazwana. Lawa makhukhi agcinwa unyaka owodwa.
Uma unayo i-akhawunti futhi ubhalisela leli sayithi, sizosetha ikhukhi lesikhashana ukubona ukuthi isiphequluli sakho samukela amakhukhi. Lekhukhi iqukethe ulwazi lomuntu siqu futhi ilahlwa uma uvala isiphequluli sakho.
Uma ubhalisa, sizosetha amanye amakhukhi ukugcina izinketho zakho zokungena ngemvume nokubuka. Amakhukhi angena ngemvume aphelelwa yisikhathi ngemuva kwezinsuku ezimbili namakhukhi okukhethwa kukho kokubonisa emva konyaka owodwa. Uma ukhetha "Hlala ungene ngemvume" uma ubhalisa, ukubhaliswa kwakho kuzogcinwa amasonto amabili. Ukungena ngemvume ku-akhawunti yakho kuzosusa amakhukhi angena ngemvume.
Uma uhlela noma ushicilela isihloko, ikhukhi eyengeziwe igcinwe kusiphequluli sakho. Lekhukhi iqukethe ulwazi lomuntu siqu futhi libhekisela kuphela ku-ID yokuthunyelwe yento oyisanda kuyenza. Ikhukhi iphela ngemva kosuku olulodwa.
Iminikelo kule webhusayithi ingaqukatha okuqukethwe okushumekiwe (isb. Amavidiyo, izithombe, iminikelo, njll.). Okuqukethwe okushumekiwe okuvela kwamanye amawebhusayithi kuziphatha ngokungathi isivakashi sivakashele enye iwebhusayithi.
Lawa masayithi angase siqoqe ulwazi olumayelana nawe usebenzisa ama-cookies, ukushumeka amasevisi kokulandela yizinkampani zangaphandle nokuqopha yokusebenza kwakho lokhu okuqukethwe obekiwe, kuhlanganise yokusebenza kwakho okuqukethwe obekiwe, uma une-akhawunti futhi usangene kule-site.
Ubani esabelana ngedatha yakho nabo
Uma ubhala amazwana, izogcinwa ngokungenamkhawulo kufaka imethadatha. Ngaleyo ndlela, singakwazi ukubona ngokuzenzakalelayo futhi samukele isiqephu ukuphawula esikhundleni sokuzigcina emgqeni wokulinganisela.
Kubasebenzisi abhalisa kwiwebhsayithi yethu, futhi sigcina ulwazi lomuntu siqu abalunikeza kumaphrofayela abo womsebenzisi. Bonke abasebenzisi bangabuka, bashintshe noma basuse ulwazi lwabo lomuntu siqu nganoma yisiphi isikhathi (igama lomsebenzisi alinakuguqulwa). Abaphathi besayithi bangabuye babuke futhi bashintshe lolu lwazi.
Yimaphi amalungelo onakho kumininingwane yakho?
Uma une-akhawunti kule sayithi noma ubhale imibono, ungase ucele ukuthi sithumele ulwazi lwakho lomuntu siqu, kufaka phakathi noma iyiphi idatha oyinikezile. Ngaphezu kwalokho, ungacela ukususwa kwanoma yiluphi ulwazi lomuntu siqu esilondolozile ngawe. Lokhu akubandakanyi idatha esiyidingayo ukuze silondoloze izidingo zokuphatha, zomthetho noma zokuphepha.
Imininingwane yakho yokuxhumana
Indlela esivikela ngayo imininingwane yakho
Yiziphi izinyathelo esinikezayo uma kwenzeka ukwephulwa kwedatha
Kubani abahlinzeki benkampani yesithathu esithola idatha
Yini eyenza isinqumo ngokuzenzakalelayo kanye / noma ukuprofetha esikwenzayo ngemininingwane yomsebenzisi
Izidingo zokulawula izimboni
Ukushada eDenmark - okungahambi kahle futhi okusheshayo
Shayela eDenmark ekuseni bese ufika ekhaya ushade kusihlwa. Umshado uqashelwa EMHLABENI WONKE futhi uzothola isitifiketi somshado we-5 womshado masinyane emva komkhosi womshado.
Igatsha laseJalimane (izingcingo kuphela ezivela eJalimane)
Igatsha laseDenmark (libiza emhlabeni wonke)
I-Tel: + 45-58595849
Igatsha laseSpain (izingcingo ezivela eSpain naseNingizimu Melika)
Ucingo: + 34-628-589-013
I-Whats App ne-Viber:
Ikheli leposi: I-Express Express, i-Valby Langgade 127, iDK-2500 Valby / Copenhagen, eDenmark
Abaphostoli & insiza yokwenza kube semthethweni
Imigomo Nemibandela neMprint
I-copyright © 2004-2019 Wonke amalungelo agodliwe.